भत्काइयो गोपीकृष्ण मुभिज रहेको भवन, जय नेपाल हल सधैका लागि बन्द, किन ? - Reel Mandu
भत्काइयो गोपीकृष्ण मुभिज रहेको भवन, जय नेपाल हल सधैका लागि बन्द, किन ?
काठमाण्डौको सर्वाधिक दर्शकको चाप रहने निकै लोकप्रिय हल गोपिकृष्ण मुभिज भएको भवन भत्काइएको छ । यो भवन भए ठाउमा २५ तलाको मल बन्ने भएको छ । जसमा, ३ वटा पर्दाको मल्टिप्लेक्स हल पनि संचालनमा आउनेछ तर यसका लागि ३ बर्ष पर्खिनुपर्नेछ ।गोपिकृष्ण मुभिजमा ३ ओटा पर्दा भएका हल थिए।
यस्तै काठमाण्डौको हात्तीसारमा रहेको जय नेपाल हल सधैका लागि बन्द भएको छ । २० बर्षदेखि संचालनमा आएको यो हल क्वेष्ट इन्टरटेन्मेन्टले जग्गा लिजमा लिएर संचालन गरिरहेको थियो। यस हलमा ४ सय भन्दा बढी सिट क्षमताको एकल पर्दा थियो ।
क्वेष्ट इन्टरटेन्मेन्टका प्रमुख नकिम उद्दिनका अनुसार सपिङ मल नभएको ठाउँमा हल चलाउन गाह्रो भएको र लिजमा लिएको जग्गा नविकरण गर्ने सोच पनि नबनाएकाले हल बन्द भएको हो। अहिले हलका सामानहरु पनि विक्रीमा राखिएको छ ।